China WIK 6800 Self Loading Concrete Mixers Manufacturer and Supplier | Wilk
.Dị. WIK6800 (Mmekọrịta). Axle 10T wheel onu deceleration abụọ breeki akwa
Modeldị njin Yuchai Ike 4108 agbam ume Taya. 1670R22.5 Waya akwa-nrụgide okpukpu abụọ
Gosiri ike 91kw Moto. Oko axial plunger moto
Formdị mbanye Lique torque Ntụgharị (ogbo agbanwe ọsọ).) Uzo esi enweta mmiri Hydraulic mpụga / / oge agba anọ
Gearbox. ZL-280 nkesa mgbanwe nnyefe Factordị ihe 7600 x 2950 x 3400mm
Gear 4 na 4 azụ ka okpukpu abụọ dị elu na obere ọsọ Ogo nke nkwadebe 9000kg
WIK Self Loading Concrete Mixers nwere isi teknụzụ patent iji mepụta akpaghị aka na mmepụta nke ihe. Kemgbe ahụ, ọ naghịzi esi ike ịmịpụta ma bufee ya. Ndi mmadu abuo nwere ike iru onu ahia nke mita cubic 140 kwa ubochi.
WIK Onyinye Na-etinye Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ngwakọta zuru ezu akpaka igwekota igwe ugbu a bụ onye kachasị agwakọta igwekota. Ọ chọrọ naanị ndị ọrụ abụọ ka ha rụọ ọrụ ụgbọ ahụ, otu bụ onye na-ebu ụgbọ ala ahụ ma onye ọzọ nwere ọrụ maka inye nri. Enwere ike iji injin ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ saịtị Na arụ ọrụ nkịtị, enwere ike ịtụgharị tankị 270 na ntanetị ma nwee ike ịhapụ ya n'ọnọdụ ọ bụla nke ahụ ụgbọ ala. Ọ dị oke nchekwa ọrụ ma dị mfe iji mepụta ihe?
Ihe kachasị mkpa na iwu nke ụlọ ndị dị elu bụ ihe nkedo. Ihe mgbe ochie achọrọ m igosi gị taa bụ ihe igwekota igwe eji eme ihe. Ọ na - ejikọ ọtụtụ ọrụ ma nwee ike dochie igwe jenerato, ndị na - ebu ibu, ndị na - agwakọta ya, ndị na - ebu mmanụ, na ndị ọrụ karịrị 6 Ahụ mmadụ na-abịa na akpịrịkpa elektrọnik ziri ezi, sistemụ mmiri na nnukwu tankị mmiri. Cargbọ ala a nwere ike imepụta ihe ruru 200 kwa ụbọchị. Cubic ihe
Ngwongwo igwe eji eme ulo ohuru ohuru nwere echiche ohuru. Ọ nwere ike na-emepụta 20 cubic mita nke ihe na otu awa. Inwe ihe igwe ihe eji eme ihe bu ihe dika inwe onye na-ebu ihe, igwekota, na onye mbu nke nwere ike ibuputa, gwunye ma wepu ya. Ndị ọrụ abụọ nwere ike ịrụ ọrụ elektrọnik ziri ezi iji dozie ihe eji arụ ọrụ. E jiri ya tụnyere ogo nke ọnụ ọgụgụ ahụ, nnukwu mmiri nwere ikike na-ekwe nkwa imeju mmiri akpaka. Ego a na-enweta na ya kwa awa ruru ọtụtụ puku yuan, a pụkwara iji akara ikike ịkwọ ụgbọala na-agakarị.
Igwe ihe igwe ohuru ohuru nwere ike meputa ihe cubic 4 nke ihe di n’ime nkeji iri na abuo. Inwe gwakọtara gwakọtara gwakọtara inwe ihe nkwụnye ihe, igwekota, ụgbọ njem na ihe karịrị ndị ọrụ iri na abụọ. Ọ nwere ike na-akpaghị aka mara, mix, na ibudata. . Kpọmkwem electronic akpịrịkpa ịchịkwa àgwà nke ihe ngwaọrụ. Usoro mmiri na-akpaghị aka na nnukwu tank mmiri na-emepụta ọnọdụ dị mma maka ịgwakọta ihe.
Ngwaọrụ Ngwakọta Ọhụrụ kachasị ọhụrụ emepe maka oge ọhụụ nke mmepụta ihe. Nri akpaaka, ndozi mmiri na-akpaghị aka, ịgwakọta akpaka na ibudata akpaka nwere ike imezi ihe nke uzuzu na ebe a na-ewu ihe. Humanized mmemme imewe, mfe na-adaba adaba omume ọrụ, ezi electronic n'ọtụtụ na nnukwu ikike mmiri tank, Ọ bụ ezigbo nkwa maka ihe inggwakọta. Ọ nwere ike ịmepụta ihe cubic 20 nke ihe nkedo n'otu awa, nke bụ akụ na ụba, nke bara uru ma dị mma.
Nke gara aga: WIK 5500 Na-adọnye Ngwakọta Ndị Na-ahụ Maka Ihe
Osote: WIK28F wiil Loader
4 ton niile-na-otu 4X4 forklift